dhaqanka American Soomaalida | USAHello | USAHello
dhaqanka American Soomaalida
Tani page on dhaqanka American Soomaalida ayaa warbixin si ay u caawiyaan in aad fahanto qaar ka mid ah kala duwanaanshaha weyn ee laga yaabaa in aad dareento sida muhaajir Soomaali Maraykanka.
Like Soomaaliya, Mareykanka ahaa hal jeer intii xukunkii gumaystaha. Maraykanka ayaa helay xorriyad ka Great Britain ee 1776 ka dib markii dagaal kacaan. Sida maanta Soomaaliya, ku qaatay sannado badan Maraykanka inay dib u dhisaan kadib markii dagaalka. Mareykanka waa mid aad u weyn yihiin dimuqraadiyadda. Americans Qiimo sare on fikradda ah hadalka oo lacag la'aan ah. Taas macnaheedu waxa weeye Americans dhihi karaa wax xun oo ku saabsan Madaxweynaha ama mudaharaad ka dhan ah wax ay xukuumadda in ay ma jecli. Tani waa ka duwan yahay kan dhaqanka Soomaaliya halkaas oo aad caadi ahaan u muujiyaan ixtiraam iyo waayeelladoodii. In Maraykanka, dadka rumaysan ay xushmeysaa Xafiiska Madaxweynaha ama Dastuurka American marka ay ku hadlaan iyo dibad waayo, waxay aaminsan yihiin.
Iyadoo dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya uu ahaa xad dhow, dagaalka sokeeye ee Maraykanka ka dhacay 1800-ka (ka badan 150 sanado kahor). Dagaalkii Sokeeye American ayaa la diriray inta badan addoonsiga iyo dhaqaalaha. Si kastaba ha ahaatee, sida in Soomaaliya, weli waxaa jira qaar ka mid ah dareen diidmo ah oo ku saabsan dagaalkii sokeeye. maanta, badan oo African-Americans weli lacag ka yar cad Americans.
In Maraykanka, caruurta waxaa laga doonayaa inay dugsiga ka da'doodu ka qayb 5-18. In Maraykanka, rag iyo dumar labaduba macalimiinta, inkastoo inta badan ee macalimiinta yihiin dumar ah. Going to college bulshada, dugsiga ganacsiga ah, ama jaamacad waa hab wanaagsan oo si aad u hesho shaqo fiican bixinta.
Guud, dugsiyada diiradda Maraykanka on barayay ardayda uga fikiraan si qoto, sida looga shaqeeyo kooxaha, iyo sida loo mari looga baahan yahay dawlad-imtixaanka. Fikirka si ba'an loola jeedaa ardayda ayaa la filayaa inay wax weyddiiyaan fikradaha. Sidaas darteed, ardayda ayaa sidoo kale laga yaabaa in ay bartaan su'aasha waalidkood. Waxaad ogaan kartaa in ilmahaagu qaado sifo this ee Maraykanka. Tani ma aha calaamad ixtiraam, laakiin dhab ahaantii xoog ah oo muujinaya in ay ku soo barteen xirfad muhiim ah in ay ku guuleystaan ​​tacliinta US iyo ganacsiga. In dugsiyada Maraykanka, waalidiinta waxaa laga filayaa inay ka qayb qaataan waxbarashada carruurtooda. Taas macnaheedu waxa weeye ka qeybgalo shirarka ama dhacdooyinka dugsiga, ardayda la siiyo waqti si ay u dhamaystiraan shaqada guriga, iyo mararka qaarkood tabaruca fasalka ardayga ee.
nidaamka dhaqaale ee The American ku salaysan tahay shuuciyad. ganacsiyada intooda badan waxaa ay leeyihiin shaqsiyaad gaar ah, kuwaas oo goolkiisii ​​ugu weyn waa in ay lacag sameeyaan. Like in Soomaaliya, Beeraha waa shaqo muhiim ah ka Maraykanka. Si kastaba ha ahaatee, ugu beeraha waaweyn waxa iska leh shirkadaha, ma qolo shaqsi. Dhamaan ganacsiyada waxaa nidaaminaya dowladda iyo loo baahan yahay in cashuur dowladda. Iyadoo in Soomaaliya ganacsiyo badan oo laga yaabaa in la siiyo Zakada si ay u taageeraan bulshada, ganacsiga ee Maraykanka loogama baahna in ay bixiyaan gargaar bulshada. Qaar ka mid ah ay doortaan in ay ka dhigi deeqaha in sababaha ay shakhsi ahaan u taageeraan. halkii, ee Maraykanka, kaniisadaha iyo ururada bulshada badan bixiyaan waxyaabaha sida cunto, guryaha, iyo daruuriya in qoysaska dakhligoodu hooseeyo.
Iyadoo Maraykanka waa dal aad u kala duwan oo leh dad oo caqiidooyin badan oo kala duwan, dad badan baa raaci qiyamka Christian iyo dabaal fasaxa Christian. About 80% Mareykanka waxay isugu yeedhaan Christian, inkastoo aysan ka qeyb laga yaabo in kaniisad. Dastuurka Mareykanka ayaa sheegtay in xukuumaddu ay tahay in aan raaco ama mudnaanta siiyaan in ay diin gaar ah. Si kastaba ha ahaatee, ganacsiga iyo xafiisyada dawladda badan way xiran yihiin maalmaha ciidaha Christian sida Christmas iyo Easter. Like Islam, Masiixiyada socota Ilaah keliya. Islaamka iyo Kiristaanka ayaa sidoo kale la mid ah in in labadaba ay dhiiri xubnaha ay u roonaatid deriskooda iyo in lagu daweeyo dadka kale si xushmad leh. Haddii aad Muslim kuna dhaqma, waxaad la hadli kartaa qofka aad u shaqayso oo ku saabsan rumaysadkiinna iyo weydiiso meesha inuu ku tukado, inta lagu jiro maalinta. Dugsiyo badan ayaa sidoo kale ku siin doonaa meel loogu tala galay ardayda si ay u dhamaystiraan Salaadda.
Sida Muslimiinta dabaal ciidaha badan diinta, qaar ka mid ah ciidaha ugu weyn ee Maraykanka waa Christmas (Dhalashadii Ciise) iyo Easter (sarakicidda Ciise). Dadka sida caadiga ah u dabaal fasaxa wada qaadan qoysaskooda iyo wada cunto cuntooyin badan oo. Saddexda kale ee fasaxa ugu weyn ee Maraykanka yihiin: Maalinta Madax-bannaanida (July 4-teedii), Sanadka Cusub ee Eve (December 31-) iyo Halloween (December 31-). Maalinta Xornimada waa la dabaaldego rashka iyo barbakiyuuyada. New Years Eve waa dabaal by kor joogi daahay iyo tirinta hoos waqtiga ilaa saacad ku dhufto saqda dhexe; iyo Halloween la xusaa sida maalinta oo doqon ah in ay kor u labistaan ​​oo ay leeyihiin xiiso leh.
Dhalashada ayaa sidoo kale u dabaal dalka Maraykanka, inta badan la cake iyo saaxiibada. Qoysaska carruurta yar yar inta badan waxay yeelan doonaan labada dhinac iyo dariskaaga ku casuunto, fasalka iyo saaxiibada si ay ugu dabaal dhalashada.
Si ka duwan Soomaali, dadku caadi ahaan aan qirsanayn maalinta qof dhinto, waxaa laga yaabaa in inkastoo dadka qaarkood ay dareemaan murugo maalintaas ama booqo qabriga qofka haddii ay lagu aasay qabuuraha a.
Soomaali Qaar waxay yidhaahdaan, iyaga oo aan haysan wax xirfadaha shaqaalaha American. Si kastaba ha ahaatee, taasi run ma aha. Soomaalidu waa dhaqan aad u oral. Taas macnaheedu waxa weeye dad badan oo Soomaaliyeed ay leeyihiin xirfadaha xiriirka xoogan, xirfad muhiim ah in Maraykanka, gaar ahaan shaqooyinka nooca adeegga macaamiisha. Tani waa meel ay Soomaalidu ka dhalan kartaa in dhaqaalaha Maraykanka. Soomaali badan ayaa sidoo kale waxay leeyihiin tayo hoggaamineed oo xoog leh oo ay awoodaan si ay u caawiyaan ururada hogaanka ama barnaamijyada ee bulshooyinkooda.
In Maraykanka, aad waxaa loo ogol yahay inay guursato hal qof oo kale. Xaasas ka soo horjeedaa sharciga. Furiinka waa wax caadi ah in Maraykanka.
In Maraykanka, dad badan soo booqdaan dhakhtarka for Baadhitaanada sannadlaha ee halkii kaliya marka ay jirran yihiin. Dhakhaatiirta waxaa aad u ixtiraamo ee dalka Mareykanka. sharciyada Mareykanka u baahan qof kasta inay saxiixaan qoraalka sii daayo si ay u oggolaadaan dhakhaatiirta si ay u wadaagaan macluumaadka ku saabsan caafimaadka xubnaha kale ee qoyska ama asxaabta. Haddii dhakhtar ma hadli doonaan wax ku saabsan daryeelka caafimaadka ee xubin ka tirsan qoyska ee aad, ha u qaadan sida calaamad ay yihiin fiicnayn laakiin xusuusnow waa sababta oo ah shuruucda America ee.
Dadka intooda badan ee US waxay leeyihiin saddex magacyada: ay magaca koowaad, magaca dhexe, iyo magaca qoyska ama Magaca awoowe. In Maraykanka, Haweenka inta badan doortaan in ay qaataan ay nimankooda Magaca awoowe marka ay is guursadeen, inkastoo qaar ka mid ah ay doortaan in ay dhawraan Magaca awoowe u gaar ah. Tani waa ka duwan yahay ee Soomaaliya, halkaas oo haweenka ugu magaca qoyska sii. Mararka qaarkood, haddii aad leedahay magac oo kala duwan la soo dhaafay ka badan ilmahaaga, laga yaabaa in lagaaga baahan yahay inaad keento cadayn in ilmuhu yahay ilmahaaga.
Waxaa wax laga xumaado, odayaasha aadan haysan isla heerka ixtiraam dalka Maraykanka sida ay sameeyaan Soomaaliya. Tani waxay noqon kartaa sixitaanka adag waayeelladoodii Soomaali. In Maraykanka, dadka u muuqdaan in ay ixtiraam dheeraad ah si dadka qaba jagooyinka shaqo sare sida Professor jaamacad ama hoggaamiyayaasha ganacsiga, ama dadka hodanka ah.
In Maraykanka, fikradda ah waqtiga waa adag. Si ka duwan Soomaaliya oo ay dadku sugi doonaa inuu ka tago waxqabad ilaa uu dhammeeyey, ee Maraykanka, dadka ka tagi doono dhacdooyin hore si loo hubiyo in ay ku jiraan waqti ay ballan soo socda. Time si gaar ah muhiim u ah shaqada iyo dugsiga goobaha.
xiriir jidh ahaaneed
In Maraykanka, ragga iyo haweenka sida caadiga ah gacan. Si kastaba ha ahaatee, waa naag inay hoos inuu gacan qaado ama in la taabto nin. Ragga kasta oo kale oo ma taaban marar aad u badan dalka Maraykanka, marka laga reebo gacanta ku salaanto ama hab degdeg ah. Si kastaba ha ahaatee, waa ok inay taabtaan nin oo kale. Haweenka ee dalka Maraykanka u badan tahay in istaaban, sida hab ah marka ugu horeysa arko mid ka mid kale ama marka ay dhahdo. Xubnaha qoyska badanaa taabto iyo hab kasta oo kale oo.
Inkastoo xidhiidhka afka ugu qiimeeyo ee Soomaaliya, qoraal Maraykanka waa nooca ugu muhiimsan ee isgaarsiinta. Haddii aad qorto wax ama saxiixdo warqad ee Maraykanka, dadka warqada qaadan doonaa si dhab ah. Qandaraasyada sharciga ah waxaa u saxiixay waraaqaha ku qoran in la fulin karo by maxkamadda.
Dadka Maraykanka ah inaanan u ekaan saaxiibtinimo marka loo eego Soomaalida. Tusaale ahaan, nin Soomaali badan ku qaataan waqti badan deriskooda iyo qoyska Salaan marka ugu horeysa toos. In Maraykanka, dadka ku odhan kara hi subaxdii ama ilka laakiin ha qaadan waqti in kasta oo kale oo soo salaamayaan. halkii, way idin soo salaamayaan kartaa co-workers aad marka ugu horeysa ee aad timaadid shaqada.
oo waxay ku yidhaahdeen mahad
In Maraykanka, dadka inta badan odhan “mahadsanid” ama “mahad” si ay u muujiyaan mahad, xitaa falalka yar yar sida qof haysta albaab furan idiin ama riixaya badhanka a on wiishka ah. Tani waxay noqon kartaa kala duwan ka badan ee Soomaaliya, halkaas oo ay muhiim ma aha in la yidhaahdo mahad. Haddii aadan dhihi ha mahad, Americans laga yaabaa in u malaynaysid inaad tahay fiicnayn. Sidaas tani waa mid ka mid ah wax aad sameyn karto si ay u caawiyaan la qabsato dhaqanka American.
In Maraykanka, dadka inta badan la cunaa oo la koob (fargeeto, mindi iyo malqacad).
In Maraykanka, dadka intooda badan isticmaalaan saxan u gaar ah oo kan maddiibad cunto kasta halkii ay ka wada wadaago iyo maddiibad ama saxan. Haddii aad leedahay martida ah ee gurigaaga, waxaad iyaga siin karaan cuntadooda on saxan oo kala duwan. Haddii aadan hubin haddii cuntada waa la wadaago ama hal qof, waxaad ka codsan kartaa.
Dadka ee Maraykanka badan oo sarreen ah, ama carbs cuni. Tani waa mid aad u kala duwan ka badan cunto dhaqameed Soomaali, taasoo sare ee protein. Hilibka waa badanaaba qaali ah ee Maraykanka, hilib xalaal ah gaar ahaan. Haddii aad ka heli kartaa dukaan Soomaali xaafadaada, waxaa laga yaabaa in ay iska iibiso hilib xalaal ah, waayo, qiimo ka jaban ka dukaanka raashinka ah.
dhaqanka Soomaalida caadi ahaan waa la wadaago, halka dhaqanka American waa shaqsi more. Taas macnaheedu waxa weeye dad badan oo Soomaaliyeed u arkaan lacag sida wax la wadaago iyo lacag si ay qoyska ah ama saaxiib waa kuwa u baahan siin doonaa. In Maraykanka, dadka waxay dooran karaan inay ku deeqaan ama caawin xubnaha qoyskooda kordhiyay ama saaxiib, laakiin ma ayaa la filayaa.
In Maraykanka, taliyayaal si aad u wanaagsan loo ixtiraamo. Waa caadi in Americans si aad u aragto la-taliye si looga caawiyo dhimashada xubin qoyska ah ama dhacdooyin kale oo murugo iyo adag.
Ku dhawaad ​​dugsi kasta uu leeyahay la taliye si uu kaaga caawiyo ardayga gaaro himilooyinka ay sida kulliyadda socday. Haddii ardaygu u baahan yahay inuu arko la-taliye, tani waxay noqon kartaa kaalmo weyn qoyskaaga iyo micnaheeda ma ahan wax xun, waayo, qoyskaaga.
In Maraykanka, qoysaska ugu noolaan kaliya xubnaha qoyska deg deg ah ay (Tan waxaa looga jeedaa waalidiinta iyo carruurta). Si ka duwan Soomaaliya, oo kaliya tiro yar oo qoysaska ku nool qoysaskooda la dheereeyey. Ragga iyo dumarka labadaba waxa loo arkaa muhiim ah in reerka. Ragga caawiyo shaqada guriga sida cunto karinta iyo nadiifinta iyo haweenka waxaa laga yaabaa in ka shaqeeyaan meel ka baxsan guriga. Ragga sameeyo hawlaha kuwan waxaa weli loo arkaa mas'uul ka ah guryahooda.
qoysaska ugu badan ee Mareykanka ku leeyihiin laba caruur ah, iyo heerka la qaadan hoose. Taas macnaheedu waxa weeye guryo badan American, baabuur, iwm. ayaa loogu talagalay qoysaska leh afar ama ka yar xubnaha marka loo eego qoysaska waaweyn inta badan Soomaalidu leeyihiin. Tani waxay ka dhigi laga yaabaa in ay ku adag tahay qoyskaaga si aad u hesho guri ama baabuur. Soomaalida u muuqdaan in ay leeyihiin bulsho xoog leh oo network qoyska halkaas oo haween badan oo kaa caawin kara is ogow caruurta. Waxaa wax laga xumaado, naag in Maraykanka aan haysan taageero badan oo haweenka ka shaqeeya Mareykanka waxay u halgamayaan dheelli shaqada iyo guriga waajibaadkooda. In Maraykanka, dad badan oo ku bixiso in ay u diraan carruurtooda si ay u xanaanada. Waa sharci in caruurta keligood ha uga tegin guriga aan lala joogin ka dhanka ah. Waxa kale oo sharciga ka dhacay ama carruurta jir ahaan anshaxa ka dhanka ah.
In Maraykanka, rag iyo dumar ku nool, shaqada, iyo dugsiga wada. Tani waa mid ka mid ah hagaajin dhaqanka ugu adag ee qoysaska Soomaali. Waxaad laga yaabaa inuu ka qeyb dhacdooyinka co-ed dheeraad ah ee Maraykanka ka badan ee Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, xaaladaha muhiim ah, sida booqashada dhakhtarka, waxaad codsan kartaa in dhakhtar ee isku sinjiga.
Gabdhaha ee dalka Maraykanka ayaa la filayaa in ay sii wadaan waxbarashada ay sida wiilasha. Inkastoo gabdhaha Soomaaliyeed dhallinyaro badan ay bilaabaan inay ku caawiyaan qoyska ku wareegsan da'doodu u ordi 7 ama 8, carruurta American labada caawiyo hawlaha. gabdhaha American aan la filayaa in uu ordo reerahoodii ilaa waa weyn ama is guursan.
In Maraykanka, haweenka / gabdhaha ayaa weli la filayaa inuu shaqada iyo dugsiga tagaan inta ay caadada.
Mareykanka ayaa waxay bixisaa taageero aad u yar in hooyooyinka cusub. Ka fiirsaneysa Mareykanka waa mid ka mid ah dalalka ugu qanisan dunida oo dhan, waa mid aad u murugo leh. In Soomaaliya, Haweenka inta badan ku qaataan 40 maalmood nasasiiyay dhalmada ka dib. In Maraykanka, Haweenka badankood ayaa la filayaa in ay is ogow of ilmahooda on iyaga u gaar ah, mid ama laba todobaad ka dib marka. Ragga caadi ku soo laabto si dhaqso ah u shaqeeyaan ka dib dhalashada cunugooda. Shaqo-bixiyeyaal badan ma bixiyaan fasax xaamilonimo bixisay iyo filan haweenka inuu ku soo laabto sida ugu dhaqsiyaha badan u shaqeeyaan. Dowladda Mareykanka ayaa u baahan tahay shaqo-in la siiyo fasax un mushaarka ku xiran tahay meesha aad ka shaqeysid.
Kala duwanaanta ee dalka Mareykanka
recipe bariis Soomaali
Waalid u buug-Soomaaliga